Seteembar | 2013 | WEEJIDOW
Archive for Seteembar, 2013
War farxad LEH : Kulan guul kusoo dhamaaday oo ay maanta Muqdisho ku yeesheen xildhibaanada kasoo jeeda lixda gobol ee Koonfurta iyo Koonfurgalbeed Soomaaliya.
Seteembar 30, 2013
WAAJIDPRESS – 30 Sept 2013:
Kullan ay soo abaabuleen xildhibaanada beelaha Digil iyo Mirifle ee ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta uu ka dhacay magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay xildhibaanada beelaha dega lixda gobol ee koonfurta iyo koonfurgalbeed Soomaaliya ee kala ah Jubbada hoose, Jubbada Dhexe, Bay, Shabeelada hoose, Gedo iyo Bakool.
Kulanka ay yeesheen xildhibaanada beelaha wada dega lixda gobol ayaa waxaa gogoshiisa dhigay xildhibaanada beelaha Digil iyo Mirifle ayada oo lagaga hadlay arimo quseeya shirka Baydhabo loo ballansanyahay.
Xildhibaanada maanta kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ku balamay inay labada cisho ee soo socota iskugu yimaadaan kulan kale kadibna laga wada qaybgalo shirka magaalada Baydhabo ka furmayo kaasoo ay beelaha wada dega gobolada lixda ah ee koonfurta iyo koonfurgalbeed Soomaaliya ku wada dhisan doonaan dowlad goboleed mideysan awoodna leh.
Xubin kamid ah gudiga qaban qaabada shirka Baydhabo oo ay la hadashay Baidoa Media Centre ayaa sheegay inuu kulankii maanta kusoo dhamaaday guul iyo is afgarad.
Beelaha ay xildhibaanadoodu kasoo qaybgaleen kulankii maanta ayaa waxaa kamid ah, Digil iyo Mirifle, Ogaadeen, Mareexaan, Biyamaal, Gaaljecel, Sheekhaal iyo kuwa kale oo fara badan waxna ka dega gobolada lixda ah ee loo dhisayo dowlad goboleedka.
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu wafdigii ballaarnaa ee xildhibaanada Digil iyo Mirifle ee uu hogaaminayay mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya tagay magaalada Baydhabo, ayaa waxaa sii xoogeysanayay dadaalka dhinaca diblomaasiyada ah ee ay wadeen xildhibaanada Digil iyo Mirifle si ay xildhibaanada jaalkooda ah ee lagasoo doorto gobolada lixda ah uga dhaadhicin lahaayeen inay qayb ka noqdaan shirka Baydhabo si ay dadyowga ku dhaqan goboladani u dhistaan dowladgoboleed xoogan oo ay dadka oo dhan ku dheefsadaan kuna nastaan islamarkaasna ay tiir adag oo kamid ah dowladaha kamid noqonaya Soomaaliyada cusub ee federaalka ah u noqdaan.
War deg deg ah: MAAMULKA FAROOLE OO BILAABEY XASUUQ & KA GANACSIGA DADKA KOONFUR GALBEED EE PUNTLAND JOOGA
wararka naga soo gaaraya Deegaanada Puntland ayaa sheegaya in dadlii koonfur galbeed soomaaliya ee kunoolaa deegaanadaasi. waxaa jira boqolaal dad ah oo isugu jira rag iyo dumar oo reer koonfur galbeed ah ayaaa ayaa waxaa loo taxaabay xabsiyo aan la ogeyn oo dadkaasi lagu haayo halka ay jiraan dad si toos ah xabsiyada maamulka faroolana lagu haayey.
waxaa jira dad si xun loo jirdiley kuwo la diley , kuwo xoolahooda laga qaatay o la dhacay iyo meelba aan lagu sheegeynin, dhacdadii ugu dambeysey ayaa ah in Imaam Masaajid iyo intii ka ag dhoweyd oo kunoolaa xaafada Garsoor ee Magaalada Gaalkacyo waxaanaIimaamkaasi lagu magacaabayey Imaam Yacquub.
xaaladaan xanuunka badan oo qeylo dhaanteeda gaartey deegaanadii Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa Warbaahinta Arlaadii ka wareysatay Gudoomiyaha degmada Buurhakaba Mudane Maxamed Yuusuf waxaana wareyset Wariyaheena Cali Ilyaas Cabdullaahi ” ABTIGA” Faroole ayaa Gudoomiyuhu aad u canaantay wuxuuna ugu digey in dadka barakacayaasha ah uu amaan siiyo hadii kale ayaguna talaabo qaadayaan.
Gudoomiyaha degmada Buurhakaba ayaa sidoo kale wuxuu Fashilayaa Jaaliyadaha Reer Buur ee Aduunka ku kala daadsan dhamaantooda in deegaankooda wax uqabtaan iska daayee Salaantii ayaa laga la”yahay ayuu yiri ee hadii deegaanadiina aad dhisan weusaan ma waxad ismoodaan in UK & Meelaha aad joogtaan ay idin noqoneyso GURI RUMAAD,
War Ilaah ka yaabo deegaaniina iyo dadkiina wax tara saan macquul ma ahan ayuu warkiisa kusoo koobey Mudane Axmed Yuusuf Gudoonka sare ee degmada Buurhakaba oo u waramayeyWariyaheenaCali Ilyaas Cabdullaahi ” ABTIGA”
Qarax goor dhow ka dhacay Magaalada Kismaayo oo ay ku waxyeeloobeen Ciidanka Jubba
Wararka ka imaanaaya Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxay sheegayaan in goor dhow oo caawa ah uu ka dhacay qarax.
Qaraxa oo loo adeegsaday bambada nooca gacanta laga tuuro, ayaa waxaa lagu weeraray gaari nooca Cabdi Billaha ah, oo ay la socdeen Ciidamada ammaanka ee Maamulka Jubba.
Qaraxaan oo gaariga lagula eegtay inta u dhaxeyso FarisyoonkiiLeegada iyo Saldhiga, ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku waxyeeloobeen tiro ka tirsan Ciidanka Jubba.
Ilaa iyo hadda waxaa la ogyahay dhaawaca laba askari oo ka tirsan Ciidankii la socday gaariga qaraxa lagu tuuray. Waxaana lagula cararay Isbitaalka weyn ee Magaalada Kismaayo.
Ciidanka oo qaraxa kadib adeegsatay rasaasta nool nool, ayaa waxaan jirin cid ilaa iyo iminka la sheegay inay waxyeelo ka soo gaartay.
Nin dhalinyaro ah oo la sheegay in uu bambada uu ka dambeeyay, ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ka baxsaday, halkii uu kula weeraray Ciidanka.
Taliyaha Saldhiga Booliska ee Kismaayo Maxamed Cabdi Buule, ayaa xaqiijiyay in qaraxaan lala eegtay Ciidanka ammaanka.
War deg deg ah: Qarax khasaaro geestay oo ciidamada Kenya lagula eegtay gudaha dalkooda
Seteembar 29, 2013
Dhaxleey – War hadda na soo gaaray ayaa sheegaya in qarax weyn caawa lala eegtay ciidamo boolis ah oo ku sugnaa xerada qoxootiga dhagaxleey ee gobalka Waqooyi-bari dalka Kenya.
Dad ku sugan xerada oo la hadlay Caasimada Online ayaa sheegay qaraxa in uu ahaa mid weyn oo khasaaro soo gaarsiiyay ciidamada lala eegtay balse ,ma sheegin faah-faahin ku saabsan inta uu la egyahay khasaaraha.
Goobjoogaal ku sugan xerada ayaa arkay ciidamo badan oo la saarayo baabuurta gurmadka degdega kuwaasoo waxyeelo ay ka soo gaartay qaraxa oo siweyn looga maqlay guud ahaan xeryaha qoxootiga Soomaalida ee dalka Kenya.
Weerarka kaddib waxaa goobta soo gaaray ciidamo badan kuwaasoo isku gadaamay goobta qaraxa uu ka dhacay.
Qaraxa ayaa la sheegay in uu ahaa mid goobta la galiyay, isla markaana lala eegtay ciidamadii goobta joogay.
Weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaadkii hore Al-Shabaab ay weerar ku qaaday dhismaha xarunta ganacsiga Westgate ee Nairobi, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 60-qof tiro intaas ka badana ay ku dhaawacmeen.
Xeryaha qoxootiga Kenya waa kuwa ugu ballaaran adduunka waxaana ay hooy u yihiin rubuc-malyuun qof oo u badan Soomaali ka soo carartay dakooda.
Waxaa maanta Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan gaaray, Xildhibaano, Masuuliyiin ka socda Wasaarada Arrimaha Gudaha iyo Siyaasiyiin ka soo jeeda Gobolka.
Wefdigaan oo ka soo amba baxay Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay Garoonka Ugaas Khaliif ee Magaalada Baladweyne.
Wefdigaan ayaa waxaa horkacaayay Agaasimaha guud ee Wasaarada Arrimaha Gudaha ee Xukuumada Cali Abtidoon Xalane. oo goor dhow loo galbiyay Xarunta Gobolka.
Ujeedada ay u taggeen Magaalada Baladweyne, ayaa waxay salka ku heysaa, sidii dadka Deegaanka ay u soo dooran lahaayeen Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Hiiraan. Ka gadaal markii uu waqtigiisu dhamaaday Gudoomiyaha iminka tallada haaya Cabdi Faarax Laqanyo.
Xubnahaan oo kulamo la yeelan doona Odayaasha Dhaqanka, waxgaradka, Culimada, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba Masuuliyiinta Dowladda ee Gobolka, ayaa waxaa lagu wadaa inay soo magacaabaan Gole Deegaaneed.
Golaha Deegaanka oo lagu soo xuli doono habka beelaha, ayaa waxaa lagu wadaa inay soo doortaan Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Hiiraan.
Dowladda ayaa waxay Gobolka Hiiraan kaga sugan tahay Degmooyinka Baladweyne iyo Matabaan, halka Degmooyinka kale ee Buulo Burde, Maxaas iyo Jalalaqsi, ay ka arrimiso Al Shabaab.
Madaxweyne Xasan Shiikh oo goor dhaw Muqdisho ka soo dagay & warar sheegaya in isaga wadooyinka Muqdisho loo xiray.
WAAJIDPRESS – 29 Sept 2013:
Wafdi uu hogaaminayey madaxweynaha dowlada Federalka Soomaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa saaka dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho iyadoona si heer sare ah loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Wafdiga madaxweynaha ayaa waxa garoonka Adan Cadde uga hortagay gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari, xildhibaano, wasiiro iyo Saraakiil ciidan waxaana wafdigaasi loo galbiyey Xarunta Madaxtooyada Villa Somaliya.
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ayaa waxa uu kaga soo qeyb galay Dalka Biljimka Shirkii New Deal, Shirkii Qaramada Midoobey ee ka dhacay New York oo sidoo kale shir uu madaxweynaha uga soo qeyb galay.
Xasan Shiikh ayaa sidoo kale kulamo kala duwan waxa uu la soo qaatay Jaalliyada Somaaliyeed ee ku sugan dalka Mareykanka iyadoo mas’uuliyiin la socday madaxweynaha ay sheegeen inay guul safaradoodii kusoo dhamaadeen.
Iyadoo dhinaca kalena xirnaanshihii wadooyinka loo maleeynaayo in madaxweynaha datiis loo xiray, shacabkana loo jeediyay in la helay warar sheegaya in Al-shabaab ay maanta damacsan yihiin qaraxyo ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho. İyadoo markii madaxtooyada loo gudbiyayna isla markiiba wadooyinka oo dhab la furay.
GUDOOMIYAHA GOBOLKA HIIRAAN OO DHULBOOB BILAABEY
Seteembar 28, 2013
Xilibaan Cabdinaasir Gaarane oo kamida Xilibaanada Barlamaanka Dowlada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in uu waalan yahay kagadaal markii Doraad ay shir isugu yimaadeen Xilibaanada kasoo jeeda Gobolka Hiiraan oo ay kamid ahaayeen Xilibaano kala matalaayey Beelaha Xawaadle iyo Surre kaasoo looga hadlaayey Maleeshiya Beeleed uu Soo dajiyey Deegaamada Deefow iyo Kabxanleey Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Laqanyo oo uu Ku doonayo dhul boob Deegamadan oo ay dagaan Beelaha Surre.
Xilibaanada ka doodayey sidii arintan Loo xalin lahaa gacan kahadalna uusan uga dhici laheyn ayaa markaliya waxaa ay Xilibaanada Dhexdhexaadinta waday layaabeen hadalka Xilibaan Gaarane kaasoo uu ku taageeray Maleeshiyada dhulboobka ah ee uu keensaday Gudoomiyaha Gobolka oo ay is Ku heebta yihiin iyadoo xilibaanadii kale ee Beelaha Surre lafajaceen sida fudud ee uu Ku aqbalay Xilibaan Cabdinaasir Gaarane Dhul boobka uu Wado Gudoomiye Laqanyo ee ah dhul aadan laheyn Xoog Ku qaado.
Xilibaanadii kale ee kasoo jeeday Beelaha Surre ayaa Ku tilmaamay Xilibaan Gaarane Oday waalan oo aan u hadlikarin danta Beelaha Sure, arintan dhul boobka ahna aan la aqbalikarin.
Shir kale ayaa lagu balamay kaasoo si gaara u dhexmaridoona Beelaha Xawaadle iyo Sure si xal kama danbeys ah looga gaaro arintan ka taagan Deegamada Deefow iyo Kabxanleey oo ay Dagaan Beelaha Sure kana tirsan Gobolka Hiiraan.
War deg deg ah: Madaafiic caawa lagu weeraray mid kamid ah Xarumaha Ciidanka Amisom ee Magaalada Muqdisho ku lee yihiin
WAAJIDPRESS – 28 Sept 2013:
Wararka ka imaanaaya Magaalada Muqdisho, ayaa waxay sheegayaan in caawa madaafiic xoogan lagu ekeeyay Warshadii Barafuunka, oo ay fariisimo ku lee yihiin Ciidamada Midowga Afrika ee Amisom.
Dhismaha Warshadii Barafuunka, oo ku yaala Degmada Heliwaa ee Gobolka Banaadir, ayaa waxaa lagu ganay tiro ka badan 10 xabo oo madaafiic ah. oo caawa si weyn halkaasi looga maqlay.
Sidoo kale madaafiic kale, ayaa waxaa isla caawa lagu weeraray Dhismaha Shaneemo Cabdi Waayeel, oo sidoo kale ku yaala Degmada Heliwaa.
Madaafiicda, ayaa waxaa xigay weerar hubeysan oo lagu ekeeyay Sarta Qabyada ee Degmada Heliwaa, oo ay deggan yihiin Ciidanka Hay’adda Nabad Suggida.
Xoogaga weeraray Sarta Qabyada, ayaa waxaa lagu soo waramaayo, inay ku garaaceen gantaalaha garbaha laga gano, isla-markaana ay ku soo baxayn Ciidanka Nabad Suggida. Sidaana uu ku dhex maray iska horimaad fool ka fool leh.
Weerarkaan oo goor dhow uun dhacay, ayaa waxaa adag in xog rasmi ah laga helo khasaaraha ka soo kala gaaray dhinacyada, uu u dhaxeeyay.
Goobjooge ayaa waxa uu sheegay in dadka Deegaanka ay dareen cabsiyadeed ka muujiyeen, weerarada dhowrka jiho leh ee caawa ka dhacay Degmadaasi Heliwaa.
Saraakiisha Dowladda iyo Xoogaga weerarka soo qaaday, ayaan weli wax war ah ka soo kala saarin, madaafiicda iyo iska horimaadka caawa halkaasi ka dhacay.
DAAWO HEESTII LOO DIYAARIYEY CALANKA MAAMULKA KOONFUR GALBEED EE LIXDA GOBOL
War deg deg ah: Mareykanka oo helay xog sheegeysa in Shabaabku ay maleygayaan weeraro hor leh oo Kenya gil gila
Saraakiil ka tirsan Hay’adda ammaanka Mareykanka ee FBI, ayaa waxay ka diggeen weeraro abaabulan, oo ay Shabaabku markale ka geystaan dalkaasi Kenya.
Telefishinka Caalamiga ah ee CNN, oo soo xiganaaya Saraakiil Mareykan ah, ayaa sheegay inay jiraan warar sheegaaya, suurta galnimada in markale ay weeraro qorsheysan ka dhacaan dalka Kenya.
Saraakiisha Mareykanka, waxa ay Hay’adaha ammaanka ee Dowladda Kenya, ay kula dardaarmayn inay feejignaan galaan, kana hor taggaan khatarta markale kaga soo wajahan Ururka Al Shabaab.
Saraakiishaan, ayaan kala cadeyn halka ay weeraradu ku wajahan yihiin, marka laga reebo inay si guud u sheegeen inay Kenya markale u nugushahay, weeraro xoogan oo dalkeeda ka dhaca.
Xoogaga Al Shabaab, ayaa waxay ku hanjabeen inay sii wadi doonaan weerarada abaabulan, ee ay ka geysanayaan dalka Kenya, ilaama ay Kenya Ciidamadeeda kala baxeyso, sida ay sheegeen Soomaaliya.
Sirdoonka Dowladda Kenya, ayaa waxaa la sheegay inay wax ka ogaayeen weerarkii lagu wiiqay suuqii ganacsiga ee Westgate. Ha yeeshee aynaan waxba ka soo qaacin halista weerarkaasi.
Xildhibaan C/laahi Diiriye oo ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Kenya, ee laga soo doorto Degmada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, ayaa Sirdoonka Kenya ku eedeeyay kuwo fashilmay.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Seteembar, 2013.